Mpanamboatra sy mpamatsy entana ny entona ambongadiny | Ara-potoana
Ahoana no nanampian'ny serivisy pick and pack anay ny mpanjifa? Manome serivisy fonosana feno namboarina izahay mba hanomezana fahafaham-po ny orinasanao! 99,6% ny tahan'ny fitadiavana marina Tafiditra tanteraka amin'ny tranonkalanao sy amidio ...
Manome serivisy fonosana feno namboarina izahay mba hanomezana fahafaham-po ny orinasanao!
Tafiditra tanteraka amin'ny tranokalanao sy ny fivarotana sehatra
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia ny famelana ny fampidirana API ny rafitry ny fitantanana trano fivarotana (WMS) miaraka amin'ireo sehatra fivarotana ampiasain'izy ireo, dia ny Shopify, Amazon, Magento, WooCommerce sns. mandefa.
Tena mirehareha izahay amin'ny taha marina momba ny fakany tonga lafatra. Mampiasa ny haitao barcode hividianana baiko ary mahazo fiofanana be dia be ny ekipanay ary ny baiko dia voamarina indroa alohan'ny fandefasana.
Izahay dia mitahiry karazan'entana famonosana isan-karazany ao anatin'izany ny boaty isan-karazany, fonosana bubble valopy sy valiny miaro. Ny ekipanay dia manana traikefa be dia be amin'ny fiantohana ireo entana rehetra nalefa dia fonosina sahaza, nasiana marika tsara miaraka amin'ny mombamomba ny orinasanao ary misy fitaovana / fampidirana marketing fanampiny tafiditra ao.
Tongasoa anao ihany koa ny manome ny fonosanao manokana, na afaka manampy anao izahay manamboatra fonosana marika misy anao any Shina mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Ny ekipanay dia mahomby amin'ny fanatanterahana ny fandefasana entana any amin'ny Amazon FBA Centres ary ny fampiasana ny fahalalany sy ny traikefany dia afaka manome anao ny fomba fizarana mahomby indrindra sy tsotra indrindra.
Rehefa mila entana maro samihafa (SKU) maro ny mpanjifa mba halefa miaraka dia afaka mandamina mora foana sy marina ireto baiko ireto izahay ary manome ny fomba fandefasana vokatra mahomby indrindra any amin'ny firenena itodiana rehetra.
Sambo amin'ny andro iny ihany
Ny fikajiana sy fandefasana baiko ara-potoana dia ilaina amin'ny e-varotra. Azontsika atao ny mifantina, manangona ary mandefa ny baiko rehetra azonao alohan'ny 4:00 hariva any Beijing amin'ny andro iray ihany, mba hahafahanao mandefa azy ireo manerantany amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana izay tianao.
Mety ho tena ilaina koa io amin'ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitry ny vahoaka vatsian'ny vahoaka vola be, izay mila alefa haingana ny baikonao rehetra. Manana traikefa izahay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fampielezan-kevitra Kickstarter sy Indiegogo izay manome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay sy ny mpamatsy vola azy ireo.
Teo aloha: Fanaterana ny lalamby
Manaraka: Fanaterana an'habakabaka